Eesh Qiyaasak … Madaarka Hargiesa Waa Dusha Ka Wasiir Farxaan A. Haybe Hoosta Ka Wasiir Maxamoud Xaashi By Abdi Mustafe | Somaliland Today
← Gobolka Togdheer Oo Hadda Lagu Soo Rogay Xaalad Deg-deg Ah Iyo Goobihii Waxbarashada Oo Fasax La Galiyey Iyo Wararkii Ugu Dambeeyay
DAAWO: Maayarka Degmada Burco Oo Ka Hadlay Xaaladda Gobolka Togdheer Isaga Oo Ku Dhawaaqay 9 Qodob Oo Lagu Xakamaynayo Xannuunka Shuban-biyoodka. →
Aw Xassan Shiekh mar uu berked miyi ka samaystay oo ay dadkii kale ee baraagaha lahaa ku heshiiyeen in biyaha sumini ay ku iibiyaan ayuu dareemay in aan cidi ka iib-sanayn. Dabeed dadkii wuxuu ku yidhi waar kaalaya biyaha iga iib sada waa dusha ka sumuni hoosta ka sadex gambo e.
Macnuhu ahaa dadkana waxaan maqashiinayaa sidii aannu ku heshiinay in biyuhu sumuni yihiin hase yeeshee hoosta waxaan kaga iibinayaa sadex gambo. Hadaba Madaarka Hargiesa ayaa la mida oo dushana waxa wasiir waraaba u taag ah ayaa ku maga caaban oo la yidhaa Farxaan Aden Haybe, hoostana waxa ka xukuma wasiirka madaxtooyada oo dakhliga ka soo baxa marka 5 meelood
loo qeybiyo ka qaata sadex meelood.
Waxa ku wehelisa marwada madaxweynaha oo ay Maxamoud Xaashi kala qeyb sadaan qarashkaa oo ku dhaca akount iyaga u gooniya. Wasiirka yar ee ku maga caabani waa calaa-faashuush oo cilmi malaha laakiin waxa ku filan wasiir baad tahay.
Labadii wasiir ee ka horeeyey Cadaani iyo Cumar Yare markiiba waxa looga bedelay sua’allo ay ka keeneen lacagta gaarka u ah Maxamoud Xaashi iyo Amina Weris iyagoo hunguri ka qabtay oo is yidhi la qeybsada kol hadaa wasiiro ka tihiin madaarka. Meyse suurta gelin oo markiiba daaqada ayaa laga tuuray. Isku soo xoori, Madaarka Hargiesa waa dusha wasiir Farxaan A. haybe hoosta ka wasiir Maxamoud Xaashi. Wasaarad iyo wakaalad aan sidaas oo kale cid kale daaha dibadiisa ka maamulini ma jirto oo madaxtooyadu meela kama maqna.
Waxa se wax lala yaaba ah waxa ay madaxtooyadu u bur-burinayso qaran nimada Somaliland ee ay qabyaalad iyo musq-maasuq u miciin satay. Bal ha la eego qoom kani halkay ku danbeeyaan kolay ummadu mar way daawan iyagoo dalan doolaya sidii kacaan kii Siyad Bare ee Nairobi dalaq yidhi.